Danjire Caalim” Sanad Walba Waxaan U Dabaal Dagnaa 1-Da Luulyo Inagoo Kala Qeybsan”+Daawo – Somali Top News
Danjire Caalim” Sanad Walba Waxaan U Dabaal Dagnaa 1-Da Luulyo Inagoo Kala Qeybsan”+Daawo
Midowgii Waqooyi iyo Koonfurta Soomaaliya sanadii 1960-kii oo hadda laga joogo 58 sano wali waxaa socda in soomaalida cadaw geedu doonayo in uu dhulkooda la wareego sidaasi waxaa yiri Danjire Maxamed Caalim oo la hadlay barnaamji toos ah oo siyaasadda lagu falanqeeyo.
Jamhuuriyaddii Soomaaliya waxay abuurmatay markii ay midoobeen labadii Gobol ee ka kala xuroobay gumaysigii Talyaaniga iyo kii Ingiriiska sanadkii 1960kii, xorriyadda iyo israaca labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur waxaa saldhig u ahaa Soomaalinimo, Jacayl iyo Hilow ay isu qabeen walaalihii gumeysigu kala qoqobay.
Dareenka wadaniyadduna waxa uu ahaa xilligaa mid aad u sareeya, ummadda Soomaaliyeedna waxaa ka go’nayd inay mar uun ka hoos baxaan nidaamka adoonsiga ee dhiig miiradka ah.
Waxay kaloo ku haminayeen Soomaalidu sidii loo xoreyn lahaa gobollada wali gumeysiga ku hoos jira ee NFD, Somali Galbeed iyo Xeebta Jabuuti, waxaana ka go’neyd in aan halganka la joojin tan iyo inta Soomaali-weyn la xoreynayo oo la midaynayo (The Greater Somalia).
Maxaa xal inoo ah markaad dib u tixraacdo Taariikhdii xornimada soomaaliyeed 1-7.1960 iyo Midowga dadka soomaaliyeed ee xiligaas.
Jamhuuriyadda Soomaaliya ama dokumenti qeexaya qaabka awood qaybsiga midowga kadib, lagama fakarin waxa dhici kara haddii khilaaf yimaado, saameynta uu ku yeelan karo midnimada, iyo qaabka khilaafka loo maarayn lahaa, xalna looga gaari lahaa si loo badbaadiyo midowg dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Fikirkii. (One State One City) wuxuu dhintay 1991dii taasina waa inay ogaadaan mas’uuliyiinta dowlada Faderaalka hogaamisa.
Falanqeyn taydu waxay Farta ku fiiqaysaa maxaa xal u ah dadka ku nool dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Dawlad dadkeedii anuu heshiis ahayn oo hal magaalo dagan inay tiraahdo midnimada Soomaaliya ayaan masuul ka nahay waa nasiib daro iyadoo wax midaysan aaney jirin waqtiga aan hadda joogno.
Waa in su’aal la iska waydiiyaa maxaa khaldan oo dadka shacabka soomaaliyeed beenta loogu sheegayaa Iyadoo wax midnimo heshiis lagu ahayn, sanad walbana waxaan u dabaal dagnaa 1-da luulyo oo been ah, inagoo mideysan, heshiis ah, islamarkaana maamul uu naga dhaxeeyo ayeey tahay inaan u daabal dagno 1-da Luulo,waa maalin ka turjumeysa midnimo iyo wax wada qabsi iyadoo xor laga yahay nuuc walbo oo gumeysi ah.
Waa in dib loogu noqdaa in la saxo dawladnimada shacabka soomaaliyeed doonayaan iyo nooca midnimo ee ay doonayaan.
Khiyaanada dowladaha deriska ah gaar ahaan Itoobiya iyo Kenya waa in hagardaamada iyo dabinka ay inoo dhigayaan inaan ka hortgano qorshahoodu waa boobka dhulka Soomaaliyeed waa inaan ka hor tagnaa anagoo heshiis ku ah dhincyada aasaasiga ah ee aan soo xusay.
Muhiimadda waxaa weeye, in 58 sano guurada ka soo wareegatay xornimadii inaynu ka baranno in laga fogaado isqabqabsiga siyaasadeed iyo colaadda dhammaadka lahayn ee Soomaalida dhexdooda taalla ku dhowaad 30 sano,
Annagoo waqtiga ka faa’iideysanayna waa in fataraaruqa aan ku beddalnaa in la wada hadlo, hadii dadka degan dhulka la yiraah jamhuuriyadda soomaaliya ay isku afgartaan in xalka nabada lagu helayo Somaliland ma go’deen in dawladnimo loo aqoonsadana ma raadiseen.
Midnimo dadka soomaaliyeed waa mid si buuxda kaga hortageyso cadaawada iyo dhul boobka ah ay hogaaminayaa dowladaha kenya iyo itoobiya waa inaan Qaadano Go’aan Geesinimo leh si aan awoodeenii u soo ceshano.
← Muqdisho Oo Si Qurux Badan Looga Dabaal Dagay 1-da Luulyo+Sawirro
Sarkaal Shabaab Ah Oo Ciidamada Dowladda Isku Dhiibay →
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed muxuu ku soo arkay xerada Turkisom?